बिरालोहरु मा कब्जियत कसरी निको पार्न गर्न
दुर्भाग्यवश, मात्र हामी, मान्छे, विभिन्न रोगहरु बाट ग्रस्त छ। हाम्रो पाल्तु जनावर - बिरालोहरु र कुकुर पनि अक्सर बिरामी, तर, हामीलाई विपरीत, तिनीहरूले बारेमा भन्न सक्दैन, हामी आफ्नो स्वास्थ्य समस्या निर्णय छ।
शायद हरेक महिला सुन्दर र कोमल Murok र बन्दुक कम्तिमा एक पटक कब्जियत रूपमा, एक बिरालो समस्या सामना गर्नुपरेको थियो। यो फ्रेंच मा दुई वा बढी दिन को लागि एक कुर्सी को कमी छ। त्यहाँ बिरालोहरु मा कब्जियत छ जसको लागि कारण धेरै फरक हुन सक्छ। यो आसीन जीवन शैली, आफ्नो पाल्तु जनावर र एक बाँणशैली आहार। साथै, यो कीडे वा कपाल को swallowing गांठ को कब्जियत उपस्थितिको जान्छ। जीवाणु overgrowth पनि रोग हुन सक्छ। ठूलो आन्द्रा indole, मिथेन र अन्य पदार्थ बाहिर आउन जीव लागि हानिकारक र सट्टा जम्मा भने, तिनीहरूले सबैभन्दा शक्तिशाली विषाक्तता जीव हुन्छ, जनावर शरीर मा बाँकी छन्। बिरालोहरु मा कब्जियत अधिक तीन दिनको लागि जारी गर्दा, यो कम भनिन्छ सर्त छ , आंत्र बाधा यस्तो फलस्वरूप सर्त एक हप्ताको एक दिन एक अवधिका लागि घातक हुन सक्छ। तसर्थ, कब्जियत को मामला मा, उपचार गर्न उपाय लिन निश्चित हुन।
यो समस्या प्राय पुरानो बिरालोहरु, बिरालोको बच्चाहरुको हुन्छ तर यो पनि उत्पन्न हुन सक्छ। सुक्खा र हार्ड मल बाहिर हार्ड, ठूलो बेचैनी पैदा। को पाठ्यक्रम, मुख्य कारण अझै पनि शक्ति आपूर्ति संग समस्या छ। megacolon - साथै, त्यहाँ बिरालोहरु मा कब्जियत गराउँछ अर्को महत्त्वपूर्ण कारण हो। यो बलियो colonic distension, जब उल्लङ्घन मात्र होइन यसको संरचना तर पनि प्रकार्य। यो रोग ग्रस्त गर्ने बिरालोहरु कब्जियत को एक राज्य मा लगातार छन्।
मा प्रारम्भिक दिन, तपाईं यसलाई आफैलाई सम्हाल्न प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। तर कब्जियत धेरै दिनको लागि जारी यदि, त्यसपछि डाक्टर गर्न बिरालो देखाउन निश्चित, किनभने अन्यथा आफ्नो पाल्तु जनावर मर्न सक्छ हुन।
एक कुर्सी को कमी साथै यस बिल्ली को बच्चा कब्जियत यस्तो छैन खाने, lethargy रूपमा लक्षण रूपमा प्रकट हुन सक्छ। जब तपाईं आफ्नो पाल्तु जनावर PAT गर्न प्रयास गर्नुहोस्, यो फ्रेंच को एक लक्षण सुनिंनु छ साथै, आक्रामक प्रतिक्रिया गर्न सुरु हुन्छ। एक बिल्ली को बच्चा तपाईं कसरी सुधार गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी उहाँको कब्जियत सामना गर्न मदत गर्न? सुरु गर्न, यो जनावर को मलको कोमल गर्न रेचक औषधि गरौं। धेरै राम्रो खनिज तेल, जो मल normalization को अप गर्न दुई milliliters लागि एक दिन दुई वा तीन पटक दिनुपर्छ गर्न। यो तेल पूर्ण भएको मल softens र आंतों पर्खाल lubricates। साथै, यो व्यावहारिक शरीर मा अवशोषित छ छैन र उसलाई हानी गर्दैन महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई यो ज्यादा गर्न महत्वपूर्ण छ, बिरालोको बच्चाहरुको मा एक कुर्सी एक मध्यम स्थिरता हुनुपर्छ। तपाईं कीडे को रोकथाम गर्न सक्छन्, यो चोट छैन। यो वा त्यो दबाइ दिंदा सधैं निर्देशनहरूको पालना गर्नुहोस्।
बिरालोहरु मा कब्जियत निको पार्न, यो धाराको पानी र संक्षिप्त दूध मिश्रण गर्न सम्भव छ। स्वस्थ जनावरहरू यस्तो दबाइ पखाला कारण हुनेछ, र कब्जियत को मामला मा - यो मल नरम र कुर्सी normalizes। को laxatives सल्लाह गर्न सक्छन् सोडियम picosulphate। कुनै मामला मा प्रयोग नगर्नुहोस् , अरंडी तेल यसलाई दुखाइ धेरै कारण रूपमा र कुनै कुनै प्रभाव छ।
त्यहाँ आंतों microflora पत्र विशेष लागूपदार्थ छन्। यो, उदाहरणको लागि, Bifitrilak। यसलाई नियमित प्रयोग गर्न सकिन्छ।
तपाईंको बिल्ली को बच्चा राम्रो स्थिति भएपछि, दायाँ आहार रोज्नुहोस्। विशेष गरी गर्मी मा एक बिरालो को आन्द्रा मा बाल भंग गर्न पेस्ट दिन। तीन वा चार पटक एक वर्ष विशेष उत्पादनहरु संग कीडे को रोकथाम गर्न। तपाईंको पशुचिकित्सा परामर्श उहाँले तपाईंलाई सबैभन्दा उपयुक्त व्यक्तिहरूलाई बताउन निश्चित छ। कहिलेकाहीं, बिरालोहरु मा कब्जियत निको गर्न, यो एक enema बनाउँछ। तर यस्तो प्रक्रिया हो, यो आफैलाई गर्न एक विशेषज्ञ सम्पर्क राम्रो छ।
विभिन्न जातिहरु को puppies मा दाँत को प्रतिस्थापन कस्तो छ?
टर्की Angora - हंस गरेको तल को Pointe मा र्नतकी
कसरी बिरालो नाम
नरम खिलौने को इतिहास र विशेष गरी यसको निर्माण
JSON ढाँचा: वर्णन, उदाहरण
जो गुणन तालिकाको आए? गुणन तालिका चंचल
को लामो भ्कगडा के हो? मध्य युग मा Thrones युद्ध - feuds लागि Infighting
कसरी धनी प्राप्त गर्न: वित्तीय स्वतन्त्रता को बाटो